Omenala Philippines: Asụsụ, Omenala na Eziokwu Ndị Ọzọ | Akụkọ Njem
Maria José Roldan | | Philippines, Gastronomy, General, Asia njem
A maara ndị Filipinz dị ka ndị ọbịa n'ọtụtụ akụkụ ụwa n'ihi na a na-ewere ha dị ka ogwumagala… ha na-adị mfe ịmegharị n'ọnọdụ dị iche iche ha nwere ike ịchọta onwe ha. Ha tolite iji lanarị, ha maara ihe nlanarị bụ.
A kpọrọ Republic of Philippines nsọpụrụ maka Eze Philip nke Abụọ nke Spain na 1543. Ndị Philippines si na ndịda Eshia. E nwere mmalite si China, India, United States na Spain, ndị lụrụ Filipinos ya mere enwere ọtụtụ ngwakọta ọdịbendị n'etiti ndị ha. Ndi agbụrụ amaala 79 mejupụtara ndị Filipino na dịka Wikipedia si kwuo, narị afọ ise gara aga enweela mmetụta dị ukwuu n'ihe gbasara ngwakọta ọdịbendị na ndị Asia na Western.
Ọchịchị colonial nke ndị Spain na 1570-1898, yana nke ndị America na 1903-1946, dugara na mgbasawanye nke ụkpụrụ Ndị Kraịst na njirimara ọhụrụ nye ndị Filipinz niile na mgbakwunye, mmekorita na ọdịbendị nke mba ndị ọzọ dịka China, India, Indonesia na Malaysia nyere Asia na kpọmkwem mmetụ aka na ihe nketa ọdịnala nke Philippines.
2 Omenala dị na Philippines
3 Interestingfọdụ ihe na-adọrọ mmasị gbasara ọdịbendị nke Philippines
Na Philippines enwere ihe dị ka asụsụ 175 a na-asụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile dịka asụsụ Malay-Polynesian na ụfọdụ asụsụ iri asatọ.. N’ime asụsụ ndị a, e nwere ụmụ amaala iri na atọ nwere amaala ihe dị ka otu nde.
Ruo ihe karịrị narị afọ atọ na Philippines, asụsụ Spanish bụ asụsụ a na-asụkarị n'okpuru ọchịchị ndị Spain. Ọ bụ 60% nke ndị bi na ya kwuru ya. Mana ojiji ndị Spen bidoro ịda mba mgbe ndị Amerịka jichiri Philippines na 1900, ọ bụkwa n’afọ 1935 ka Iwu mba Philippine kpọrọ Spanish na Bekee ka ha bụrụ asụsụ gọọmentị. Ma n’afọ 1939, asụsụ Tagalog ghọrọ asụsụ mba ji eme ihe. Asụsụ akpọrọ "Filipino" akpọrọ na 1959 na Kemgbe afọ 1973 ruo ugbu a, Filipino na Bekee bụ asụsụ ndị mmadụ na-asụkarị n ’obodo ahụ.
Omenala dị na Philippines
Philippines bụ mba nke dịgasị iche dabere na mmetụta ọdịbendị, ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime mmetụta ndị a bụ nsonazụ nke ọchịchị ha nwere, ya mere ọdịnala Spain na nke United States bụ ihe pụtara ìhè. Mana n'agbanyeghị mmetụta ndị a niile, ọdịnala Asia oge ochie nke ndị Filipinz ka dị ma bụrụ nke a hụrụ n'ụzọ doro anya n'ụzọ ndụ ha, na nkwenkwe ha na omenala ha.. Omenala ndị Filipinz maara nke ọma ma nwee ekele maka ọtụtụ mmadụ gburugburu ụwa. Fọdụ ihe na-atọ ụtọ gbasara omenala Filipino bụ ihe ndị a:
Ndị Philippines na-enwe mmasị na egwuHa na-eji ihe di iche iche mepụta ihe ochicho obi ma burukwa ndi nochitere anya ndi agba egwu na ndi otu egwu.
Christmas bụ otu n'ime ememe ndị a kacha hụ n'anya site na Filipinos. Ezinaụlọ na-agbakọta na Disemba 24 iji mee emume "Christmas Eve". A na-emekwa afọ ọhụrụ site n'ịchịkọta ndị ezinụlọ niile. Emere ya na uwe ejiri ya na mkpụrụ osisi ya na tebụl.
Ndị Filipinz bụ ọkachamara n’egwuregwu, a na-akpọkarị onye ọdịnala ya Arnis bụ ụdị ọgụ ọgụ. Ọ bụ ezie na ọ na-atọkwa ha ụtọ ikiri basketball, bọọlụ ma ọ bụ egwuregwu ọkpọ.
Ezinulo dị ha oke mkpa ma gụnyekwa ndị nna nna, ndị nne na nna ochie, ụmụ nwanne nne ya na mmekọrịta ndị ọzọ dị na mpụga dịka nne na nna ma ọ bụ ezigbo ndị enyi. Childrenmụaka nwere nne na nna na-ahụ n'anya ma mgbe nne na nna na-anọghị, ọ bụ nne na nna ochie na-elekọta ụmụntakịrị. Ndị ezinụlọ na-arụkọ ọrụ ọnụ n'otu ụlọ ọrụ. E nwere klasị mmekọrịta dị iche iche.
Interestingfọdụ ihe na-adọrọ mmasị gbasara ọdịbendị nke Philippines
E guzobere ọdịbendị Philippines dị ka nsonaazụ nke ngwakọta nke mmetụta ndị si mba ọzọ na ihe ndị sitere na ala, dịka m kwuru n'elu.
Agbanyeghị na ihe nkiri ọdịnala, akwụkwọ na kundimans (egwu ịhụnanya) n'asụsụ obodo ahụ nwetara ọfụma na mbido Corazón Aquino's Popular Power Movement, taa ndị ọbịa ga-ahụ ihe ngosi mara mma, ihe nkiri ncha, ihe nkiri Filipino na ịhụnanya na otu egwu egwu mpaghara nke sitere na pop pop .
Naanị 10% nke ndị Filipinz (ndị a na-akpọkarị ọdịbendị pere mpe ma ọ bụ agbụrụ agbụrụ Filipino) nwere ọdịnala ọdịnala ha. Enwere agbụrụ iri isii, gụnyere Badjao, ndị na-akwagharị n'oké osimiri ndị bi na Sulú archipelago, na ndị isi Kalinga, na mgbago ugwu nke Bontoc.
Philippines bụ naanị obodo ndị Kraịst dị n'Eshia, nkwenye nke ihe karịrị 90% nke ndị bi na ya nwere. Ndi otu okpukpere chi pere mpe bu onye Alakụba, onye ntọala ya bụ agwaetiti Mindanao na Sulú archipelago. Enwekwara ụka Philippine nọọrọ onwe ya, ụfọdụ ndị Buddhist, na obere ọnụọgụ animists.
Ọnọdụ ala na akụkọ ihe mere eme nke Philippines atụnyela aka n'ọtụtụ asụsụ ndị dị ugbu a, nke dị ihe niile gbasara asụsụ iri asatọ.. E mepụtara echiche nke asụsụ mba mgbe agha Spanish na America nke 1898 gasịrị, na 1936, edepụtara Tagalog dị ka asụsụ mba, n'agbanyeghị na e nwere ndị ọzọ na-azọ maka aha a, dị ka Cebuano, Hiligaynon na Ilocano.
Dịka m kwuru n'elu, na 1973, ekwetara na Filipino ga-abụ asụsụ gọọmentị. Ọ bụ asụsụ dabere na Tagalog, ma na-etinye ihe sitere na asụsụ ndị ọzọ nke mba ahụ. N'agbanyeghị ihe niile, Bekee ka bụ ebe a na-ejikarị azụmaahịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Nri Philippine anatala mmetụta ndị China, Malay na Spanish. Nri ahụ na-akọwapụta nri ụtụtụ na etiti ehihie ka a na-enye ndị na-a alcoụ mmanya na-egbu nri (pulutan). Maka nri abalị, a na-eme anụ esiri anụ ma ọ bụ skewers efere.
N'ime nri ndị a na-ahụkarị, nke a na-eji osikapa eme mgbe niile, gụnyere anụ na akwụkwọ nri esiri mmanya na galik, ndị otu eghere eghe, stew anụ na ọtụtụ ofe: osikapa, noodles, anụ ezi, ọkụkọ, imeju, ọkpụkpụ ikpere, anụ ọkụkọ ma ọ bụ akwukwo nri gbara ụka.
Efere na mpempe akwụkwọ pọpọ ahịhịa ndụ juru, azụ gbara ụka ma ọ bụ mpekere ahịhịa, na iberibe anụ ezi anụ ezi. Halo-halo bụ ihe eji megharịa ọnụ nke dabeere na ice a gbajiri agbaji na caramel na mkpụrụ osisi, ha nile kpuchie na mmiri ara ehi ntụ ntụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Philippines » Omenala ndị Philippines